MADHAV PANDEY: 03/01/2011 - 04/01/2011
राई इज किङको यात्रा : राजेश पायल राई
साप्ताहिकको प्रस्तुतिमा पछिल्लो समयमा गीतिसंग्रह 'राई इज किङ' श्रोतामाझ ल्याएका गायक राजेश पायल राई यतिखेर सांगीतिक यात्रामा व्यस्त छन् । आधुनिक गायनमा मात्र होइन, पाश्र्वगायनमा समेत नम्बर एक गायकको स्थान बनाउन सफल गायक राईले यो गीतिसंग्रहलाई जीवनकै महत्त्वपूर्ण गीतिसंग्रह बताएका छन् । साप्ताहिकको प्रस्तुतिमै गत वर्ष दर्शन नमस्ते गीतिसंग्रह ल्याएका गायक राईले त्यसबेला साप्ताहिकले जुराइदिएको नाम 'राई इज किङ' उपनामलाई नै आधार बनाएर यो गीतिसंग्रह तयार पारेका हुन् ।
गायक राईले डेढ दशक लामो गायन यात्राका क्रममा लाखौं नेपाली श्रोताको मन जितेका छन् । 'फैलियो माया दूबोसरि' लोकप्रिय भएपछि राजेशले ०५२ सालमा पहिलो गीतिसंग्रह 'मुच्र्छना' सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा फैलियो माया दूबोसरिका अतिरिक्त नमाग मसँग सहारा नमाग तथा बलेसीमा पानी तप्कियो गीत श्रोताको मुखमा झुन्डिएको थियो । उक्त गीतिसंग्रहलाई श्रोताहरूले रुचाइदिएपछि राजेशले गायन करियरमा पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । 'त्यो संग्रहका गीत सुन्नेहरू अहिलेसम्म पनि राजेश पायल राईले यति मीठा गीत गाएका छैनन् भन्छन्,' राजेश भन्छन्- 'त्यसैले श्रोतालाई त्यही फ्लेभरका गीत दिने मेरो प्रयास जारी छ ।' ०५३ सालमा उनले 'पूर्वमा रंग चढेछ' शीर्षकको गीतिसंग्रह सार्वजनिक गरे । उक्त संग्रहको गीत सल्ला सुसायो पारि वनमा लोकप्रिय भयो । ०५४ सालमा जस्ट फर यू संग्रह श्रोतामाझ आयो, जसको घुम्न जाऊँ धरान, न्याउली रोयो त्यो पारि वनमा गीत मन पराइए । यस्तै ०५५ सालमा लभलेटर सार्वजनिक भयो । उक्त संग्रहमा कोसोभोको युद्धमा शहादत प्राप्त गर्ने गोर्खाली सार्जन बलराम राईको स्मृतिमा बनाइएको गीत, कोसोभो एन्ड कार्गिल सच अ सरो, अंग्रेजी र नेपाली दुइ भर्सर्नमा थियो । 'वीरताको गाथा गाइएको भए पनि उक्त संग्रह सुपर फ्लप भयो ।' गायक राई भन्छन्- 'चर्चा धेरै भए पनि मेरा अहिलेसम्मका गीतिसंग्रहमध्ये यो सबैभन्दा कम बिक्री भएको संग्रह हो ।' त्यसपछि ०५६ सालमा बैगुनी रै'छौ मायालु शीर्षकको गीतिसंग्रह आयो । संग्रह यति धेरै लोकप्रिय भयो कि अघिल्लो वर्ष सुपर फ्लप भएको एल्बमको पीडा उनले सहजै बिर्सिए ।
०५८ सालमा उनले 'निगाह' गीतिसंग्रह सार्वजनिक गरे । उक्त संग्रहका गीतहरू मुम्बईमा रेकर्ड गरिएका थिए । संग्रहको एउटा गीतको भिज्युअल हङकङमा छायांकन गरिएको थियो । उक्त संग्रह पनि अर्को सुपर फ्लपमा दरियो । गायक राई भन्छन्- 'सुपर फ्लपपछि सुपरहिट अनि फेरि सुपर फ्लपको श्रृंखला बन्यो ।' ०६१ मा जदौ गीतिसंग्रह सार्वजनिक भयो । लोक फ्लेभरका गीत समाविष्ट यो संग्रहको गीत बदाम सोलीमा अत्यधिक लोकप्रिय भयो ।
०६३ मा कामना गीतिसंग्रह सार्वजनिक भयो । ५० हजारभन्दा बढी प्रति बिक्री भएको उक्त गीतिसंग्रह वर्षकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गीतिसंग्रहमा दरियो । नेपाली सांगीतिक फाँटमा देखिएको खडेरीको समयमा उक्त संग्रहले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । वर्ष ६३ को इमेज अवार्ड, हिट्स एफएम तथा कालिका एफएम अवार्ड पाउन सफल यो संग्रहको सफलताकै आधारमा गायक राईले नारायणगोपाल युवा पुरस्कार पनि पाए । सफलताको शिखर चढ्ने क्रममा उनले लोकभाकालाई निरन्तरता दिँदै ०६५ सालमा जदौ भाग २ सार्वजनिक गरे, जसले औसत सफलता पायो । गत वर्ष गायक राईले महत्वाकांक्षी गीतिसंग्रह दर्शन नमस्ते सार्वजनिक गरेका थिए । राई भन्छन्- 'मैले नयाँ जीवन पाएपछि मेहनत गरेर यो संग्रह तयार गरेको थिएँ, दर्शक-श्रोताले त्यसलाई मन पराइदिनुभयो ।
सुगम गायनमा स्थापित भएपछि गायक राजेश पायल राईले चलचित्र गरिबमा गीत गाउने मौका पाए । पाश्र्वगायनको यो पहिलो फड्कोमा पनि उनी सहजै जमेपछि त्यसयता राजेशको व्यस्तता घटेको छैन । चलचित्र गरिबको 'नागबेली नागबेली चुल्ठोले...' गीत श्रोताको मुखमा झुन्डिनुले पाश्र्वगायनमा उनको यात्रा जम्ने आधार बन्यो । तत्कालीन परिवेशमा चलचित्र बन्ने क्रम सुस्त भएकाले उनले वर्षभरीमा १० वटा गीत गाए । त्यसमध्ये प्रायः गीत श्रोताको मुखमा झुन्डिन सफल भए । राजेश अहिले चलचित्रका लागि महिनामा न्यूनतम ३० वटा गीत गाउँछन् । राईको सूचीमा थुप्रै हिट गीत छन् । चलचित्र सिलसिलाको सागरसरि चोखो माया र मिसन पैसाको ढल ढल जोबन उनले गाएका पछिल्ला चर्चित चलचित्रका गीत हुन् ।
Source : www.ekantipur.com/saptahik
Posted by MADHUR SARGAM at 3:26 AM No comments: Links to this post
युवक र यौन : ओशो
जब यौनको कुरा आउँछ, मलाई समाजको दोहोरो चरित्रको सम्झना हुन्छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो समाज पाखण्डीहरूको समाज हो । हामी भन्छौ, यौन भनेको छाडा हो । यसको कुरा गर्नुहुँदैन । आमा आफ्नी छोरीका अघि यौनका कुरा गर्न सक्दिन, कारण हामीलाई भनिएको छ, यौन घोर अपराधिक कुरा हो । बुबा छोराका अघि यौनको कुरा गर्न सक्दैन । भनिएको छ, यो पाप हो । जसले कुरा गर्छ, त्यो अशीष्ट हो, लाज पचेको हो । तर बाहिर कुरा नगरेर के भो ? मानिसले आफैंलाई कसरी दबाउन सक्छ ? व्यक्ति आफै यौनका कुरा सोचिरहेको हुन्छ ।
म भन्छु, यौन त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, जति कुरा गर्नुहुँदैन भनेर यसलाई महत्त्व दिइएको छ । यदि तपाईं कलेज पढ्नुहुन्छ र कुनै एउटा ढो कामा तपाईंले लेखिदिनुभयो, 'यहाँ चियाउन मनाही छ' सबै त्यहीँ चियाउन थाल्छन् । कक्षामा जतिसुकै राम्रो कुरा पढाइएको किन नहोस्, त्यो यहाँ चियाउनु हुँदैन लेखिएको कोठामा सबैको ध्यान जान्छ । यहाँ युवक र युवतीमा के फरक हुन्छ ? युवकहरू अलि बढी जोड दिएर चियाउँछन्, युवतीहरू थाहा नपाएझैं कर्के आँखा लगाउँछन् । दुवैमा उस्तै जिज्ञासा छ, आखिर ढोकामा किन लेखियो ? किन चियाउनु हुँदैन ? चियाउनु हुँदैन को अर्थ हो, त्यहाँ केही विशेष भैरहेको छ । यदि मानौं, कसैले मुन्टो फर्काई-फर्काई हेरेन भने पनि उसको मनमा पनि एक प्रकारको कौतूहल भैरहन्छ, आखिर ढोकामा चियाउन किन मनाही छ ? सबैभन्दा रमाइलो कुरा जसले आँखाले हेरेको छैन, तर मनले हेर्न खो जिरहेको छ । त्यो व्यक्ति मुखले चाहिँ के भन्छ भने कस्ता उरन्ठेउला ? ढोकामा यहाँ चियाउनु हुँदैन भनेर लेखेको देखी-देखी पनि किन चियाएका होलान् ?
मनको नियम छ, जुन कुरा जति निषेध गरिन्छ, मन उतैतिर जान्छ । यो नियम उल्टयाउन सकिँदैन । कसैले त्यसलाई जबरजस्ती रोक्ने प्रयास गर्‍यो भने उसले सपनामा पनि यो नियमको फन्दामा पर्नुपर्छ । प्रकृतिको नियममा रातपछि जसरी दिन अनिवार्य हुन्छ, यसमा फेरबदल सम्भव छैन, त्यसैगरी मनको नियम हो, जति दमन गर्छौं, ऊ त्यति सक्रिय हुन्छ । यो यौन यति महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण बन्देज हो । फ्रायडले मानिसको मन यौनको वरिपरि नै घुमेर बस्छ भनेका छन् । कुरा ठीक हो, तर फ्रायडले भनाइमा थोरै थप्नुपर्छ । फ्रायड भन्छन्, मानिसको मन यौन वरपर नै घुमिरहेको हुन्छ । म थप्न चाहन्छु, किनभने यसलाई सधैं छोप्ने प्रयास गरिन्छ । मानिसको मन यौनको वरपर घुमिरहनुको कारण त्यसको विरोध गरिनु, निषेध गरिनु वा वर्जित गरिनु हो । हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृतिले सधैं यसकै विरोध गरिरह्यो । साधु महात्माले भने ब्रह्मचर्यमा बस, यौनलाई निषेध गर । यौनलाई निषेध गरेर ब्रह्मचर्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । बरु यौनलाई बुझेपछि मात्र ब्रह्मचर्यको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ । यौनको शक्ति नबुझी ब्रह्मचर्यमा पुग्न कठिन छ, तर साधु महात्माहरूले भने, 'यौनलाई वर्जित गर ।' तिनै साधु सन्तकै कारण हाम्रो परिवारमा यौन घृणित वस्तुका रूपमा बुझियो । समाज पाखण्डी हुँदै गयो ।
आज जति पनि साहित्य लेखिएका छन्, ती सबैमा कुनै न कुनै रूपमा यौन छ । महान् साहित्यकार, महान् चित्रकार, महान् मूर्तिकारहरू यौन खुलस्त पारिरहेका छन् । किनभने समाजमा यही कुरा वर्जित गरियो । जहाँ वर्जना छ, त्यहाँ कौतूहल छ । त्यही भएर चारैतिर त्यो कौतूहलता मेटाउने प्रयास गरिँदैछ । साधु-सन्तहरू चलचित्रका पनि विरोधी छन्, तर उनीहरू के बुझ पचाउँछन् भने जतिखेर चलचित्र बन्दैनथे, त्यतिखेर पनि यौन समागम हुन्थ्यो । युवक युवतीतिर र युवती युवकतिर आकषिर्त हुन्थे । विश्वास छैन भने कालिदासका कृति पढ । कुनै कलात्मक चलचित्र त्यति अश्लील हुँदैन, जति कालिदासका कृति अश्लील छन् ।
विश्वप्रसिद्ध कवि अनातोले फ्रान्स अन्तिम सास गनिरहेका थिए । उनको गम्भीर बिरामीको प्रचार तीव्र रूपमा फैलिएपछि उनलाई हेर्न धेरै मानिस जम्मा भए । उनका सबैभन्दा निकट साथीहरू नजिक थिए, शुभचिन्तकहरू केही पर थिए । अनातोले बिस्तारै बोल्न र थोरै शब्दमात्र बुझ्न सक्ने अवस्थामा थिए । यस्तो अन्तिम अवस्थामा उनीसँग केही जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । यही सम्झेर एकजना निकट साथीले सोधे, ' जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के छ ?' अनातोलेले भने, 'अलि नजिक आऊ, तिमीलाई कानमा भन्छु ।' साथी छक्क पर्‍यो । अनातोले त्यस्ता साहित्यकार हुन्, जो आफूलाई मन परेको कुरा छतमा गएर कराई-कराई अरूलाई सुनाउँथे । अन्तिम क्षणमा जब उनलाई सोधियो, जीवनमा के महत्वपूर्ण छ ? त्यसबेला उनी कानमा सुटुक्क भन्न खोज्दै थिए । साथीले अनातोलेको मुखमा आफ्नो कान लगे । अनातोले एकछिन केही बोलेनन् । साथीले अनातोलेको मुखमा हेरे । उनले भने, 'म बोलिनँ, किनभने यस्ता कुरा नबोलीकनै बुझिन्छन् ।' यही नबोलिनु र नसुनाइनुको परिणाम यौन विकृत हुँदै गयो । यसको ऊर्जा नष्ट हुँदै गयो । गलत बाटोमा बग्दै गयो ।
यौन कसरी गलत हुन सक्छ ? जसबाट जीवनको जन्म हुन्छ, जसका कारण जीवनको बीउ फुट्छ, जसका कारण जीवनमा फल प्राप्त हुन्छ । जसमा जीवनको सारा रंग र सुगन्ध छ । जसमा जीवनको सबै नृत्य छ, जसका आधारमा जीवनका पाङ्ग्रा घुम्छन् । जसलाई परमात्माले सृष्टिको आधार बनाएका छन् । यो कसरी गलत हुन सक्छ ? चाहे फूल होस्, चाहे पन्छी, बोट-विरुवा, जनावर र मानिस ... ।
जुन दिन यो संसारमा यौन स्वीकृत हुन्छ, त्यही दिनदेखि युवतीको पोस्टर बिक्री हुन छाड्छ । बजारमा भात वा रोटीको पोस्टर बिक्री भएको देख्नुभएको छ ? किन रोटीको पोस्टर बन्दैन, युवतीको बन्छ ? किनभने भातलाई भोक लाग्दा खाने भनेर स्वीकृत गरियो, युवा-युवतीलाई गरिएन । विशेष गरी युवतीलाई त यसरी लुकाएर राखियो, मानौं त्यो तुरुन्तै हराएर जान्छ । त्यही लुकाउने प्रवृत्तिले युवती हेर्नैपर्ने वस्तु बनिन् । उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । मुस्लिम समाजमा आज पनि युवतीको खुट्टाको बूढी औंला देख्दा तृप्त हुने पुरुष भेटिन्छन् । युरो प-अमेरिकामा कसैले भन्यो, मलाई युवतीको खुट्टाको बुढी औंला देेखेर तृप्ति महसुस भयो भन्यो भने त्यसलाई पागलको संज्ञा दिइन्छ । बुकार् ले ढाकिएका कारण मुस्लिम युवतीहरूको बूढी औंला देखिनु नै ठूलो कुरा हुन्छ, तर सबैलाई थाहा छ, के छ युवतीको बूढी औंलामा ? औंलाले कामुकता बढाएको होइन, सोचाइले बढाएको हो । कागजको पोस्टरमा केही छैन, जे छ सोच्ने शैलीमा छ । जुन दिन भोजन बन्द गर्ने प्रयास गरिन्छ वा भोजनलाई लुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ, याद गर्नुहोला, त्यसै दिनदेखि बजारमा भात र रोटीको पोस्टर मारामार बिक्री हुन थाल्नेछ ।
म युवकलाई भन्न चाहन्छु, तिमी संसार बनाउने शक्ति हौ । यो शक्ति यौनमा खर्च नगर । यौन भोक लागेका बेला खाना खानुजस्तै सामान्य कुरा हो । जसरी मानिस जतिखेर पनि खानाको कुरा गरिरहँदैन, केवल खाना खाने बेलामा मात्र मीठो-नमीठोको चर्चा हुन्छ, ठीक त्यसैगरी यो पनि बेला-बेलामा आवश्यक पर्ने वस्तु हो । यो पाटोलाई जति लुकाउन खोज्यो, यसबाट जति टाढा भाग्न खोज्यो, मानिस त्यति नै कामुक बन्दै जान्छ । यो एउटा झिल्को हो, उज्यालो महसुस गर, बुझ अनि सकियो । यदि अलि पर जान चाहन्छौ, यसको शक्तिलाई बुझेर ब्रह्मचयर् मा रूपान्तरित गर । सक्दैनौ भने कम्तीमा यसलाई विकृत नबनाऊ । कोकोहोलो नमच्चाऊ ।
मेरा एक जना चिकित्सक साथी थिए । बेलायतबाट निम्तो आएपछि उनी चिकित्सक सम्मेलनमा भाग लिन पुगे । हाइट पार्कमा उनीहरूको सम्मेलन थियो । सम्मेलनमा करिब ५ सय चिकित्सक थिए । भारतबाट उनीजस्ता दुई-चार चिकित्सक गएका थिए । जहाँ सम्मेलन भैरहेको थियो, हाइड पार्क, त्यहाँ युवा जोडीहरू खुलेर प्रेम गर्थे । भारतबाट गएका मेरा चिकित्सक साथीलाई सम्मेलन नजिकैको बेन्चमा प्रेमालाप गरिरहेका जोडीले जतिखेर पनि डिस्टर्ब गरिरहन्थ्यो । त्यो जोडी आलिङ्गनमा मस्त, आँखा बन्द गरेर घन्टौं रमाइरहन्थे । मेरा चिकित्सक साथीलाई त्यही दृश्य साह्रै अभद्र र डिस्टर्बिङ लाग्थ्यो । उनलाई खान मन लाग्न छाड्यो । उनी सम्मेलनमा प्रस्तुत महत्वपूर्ण कार्यपत्र सुन्ने र कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा पनि बिर्सन्थे । उनलाई लाग्थ्यो, यी जोडीले मलाई साह्रै दुःख दिए । यहाँका प्रहरीहरू कति अनुशासनहीन ? यत्रो सम्मेलन ठीक अघिल्तिर जात्रा देखाउनेलाई किन पक्रेर लग्दैनन् ? अस्टे्रलियन चिकित्सकले मेरा मित्रलाई कोट्याएर भने, 'किन बारम्बार त्यही जोडीतिर हेर्छौ ? बारम्बार उनीहरूलाई हेर्दा तिमीलाई प्रहरीले पक्रेर लग्ला । यहाँ ५ सय चिकित्सक छन्, अरूलाई मतलब छैन, तिमीले नै किन उनीहरूलाई हेरिरहनुपर्ने ? तिम्रा कारणले हामीलाई अप्ठयारोमा नपार ।' मेरा चिकित्सक साथीले अस्ट्रेलियनलाई आफ्ना समस्या बेलिविस्तार लगाए । अस्ट्रेलियन चिकित्सकले छक्क पर्दै भन्यो, 'उनीहरू आँखा बन्द गरेर प्रेमालाप गरिरहेका छन्, त्यसमा तिमीलाई कसरी डिस्टर्ब भयो ? तिम्रो घाँटी समाउन त आएका छैनन् ।'
यो देशका धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति एक-अर्काको घरको ढोकामा रहेको प्वालबाट चियाएर हेर्न चाहन्छन्, हेरिरहेका छन् । के भैरहेको छ ? कसले के गर्दैछ ? को कहाँ जाँदैछ ? कसले कसलाई अँगालो हालिरहेको छ ? को कसको हात समातेर हिँडिरहेको छ ? ऊ हेरिरहेको मात्र छैन, त्यस्ता मानिसलाई गाली पनि गरिरहेको भेटिन्छ । अरूको चासो राख्दै हिँड्दा ऊ आफै डिस्टर्ब भैरहेको छ । कस्ता संस्कारहीन मानिस भन्दै अरूलाई गाली गर्दा उ तनावमा परिरहेको छ । आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेको छ । कारण के भने उसले जुन कुरा दबाएर राखेको छ, त्यही कुरा उसले चारैतिर देख्छ । नत्र समाजमा अरू धेरै कुरा भैरहेका हुन्छन्, मानिसको आँखामा त्यही मात्र आउनुपर्ने कारण त केही छैन ?
म युवकहरूलाई के भन्छु भने तिमीहरूका आमा-बुबा, तिमीहरूका पुर्खा, तिमीहरूका सयौं पुस्ता यौनदेखि डराए । उनीहरूलाई स्वच्छन्द हुन दिइएन । त्यसकारण तिमी पनि त्यही संस्कारका सिकार भएका छौ । अब भयभीत नहुनू । खुलेर कुरा गर्नू । यौनका विषयमा लेखिएका अनुसन्धानात्मक कृति पढ्नू । के हो यौनको मेकानिज्म ? के हो उसको आकांक्षा ? यौनको शक्ति केवल रमाइलो मात्र हो कि त्यो भन्दा पर हो ? यौनलाई जति बुझ्दै जान्छौ तिमी उति मुक्त हुँदै जान्छौ । तिमी जति यौनको सत्यतालाई बुझ्छौ, त्यति नै यौनको काल्पनिकताबाट छुट्कारा पाउँछौ । तथ्य बुझेको मानिस कथाबाट मुक्त हुन्छ । जसले कथामा चाख लिन्छ, ऊ तथ्यमा कहिल्यै पुग्न सक्दैन ।
मानिसहरू भन्छन्, म यौनको चर्चा गर्छु । यौनलाई बढावा दिन्छु । यो सत्य होइन । यौनको चर्चा गर्नु भनेको यसलाई बढावा दिनु होइन । यसको सत्य प्रकाशित गर्नु हो । म भन्छु, यो पृथ्वीबाट मुक्त हुनु छ जसले गर्दा आकाश देखियोस् । शरीरबाट मुक्त हुनु छ, जसले गर्दा आत्मा देखियोस् । यौनबाट मुक्त हुनु छ जसले गर्दा समाधिसम्म पुग्न सकियोस् । यदि हामी यौनलाई सत्तोसराप गरेर वा यौन नै सबैथोक हो भनेर त्यहीँ अल्झिरह्यौं भने हामी कहिँ पुग्दैनौं । यौनले नै हामीलाई दास बनाउन थाल्नेछ ।
Posted by MADHUR SARGAM at 3:10 AM No comments: Links to this post